जनताको हरेक सुख–दुःखसँग गाँसिन चाहान्छुः माधव नेपाल (अन्तरवार्ता)
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल यतिखेर मंसिर २१ को निर्वाचन केन्द्रीत भएर मतदाताको घर आँगनमा पुगिरहेका छन । एमालेको सहज जित हुने अनुमान गरिएको क्षेत्र नम्बर २ मा चुनावी प्रचारमा व्यस्त रहेकै समयमा पत्रकार सन्तोष खनालले वरिष्ठ नेता नेपालसँग गरेको संवाद ।
० तपाईंलाई पार्टीले रौतहट छाडेर काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार किन बनायो ?
– म रौतहटमा जन्मिए, हुर्किएँ । तर पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा मैले धेरै लामो समय तराई र काठमाडौं दुवैलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आएँ । म ३४ वर्षदेखि काठमाडौं–२ मा पर्ने कोटेश्वरको बासिन्दा हुँ । यद्यपि, राजनीतिमा को–कहाँ जन्मियो, हुर्कियो भन्ने कुराभन्दा पनि उसले निष्ठाकासाथ के कति योगदान पु¥यायो, जनताको हितमा कति समर्पित भयो, सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनमा र सिंगो राष्ट्रको विकास निर्माणको अगुवाई गर्ने सन्दर्भमा कति योगदान पु¥यायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै सन्दर्भमा म काठमाडौं–२ का जनतासँग जनप्रतिनिधिकै हैसियतमा प्रत्यक्ष रुपले गाँसिदै आएको छु । त्यसैले पार्टीले यी सबै पक्षको मूल्यांकन गरेर नै मलाई काठमाडौं–२ को उम्मेदवार बनाएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।
० तपाई सहज स्थितिका कारण काठमाडौँ २ मा उठेको भन्ने चर्चा पनि छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
– हा..हा..(हाँस्दै) मैले तपाईंको अघिल्लो प्रश्नमै कतिपय कुरा प्रष्ट पारिसकेको छु । त्यसैले सहज स्थितिका कारण काठमाडौं २ रोजेको भन्ने मिथ्या आरोपको खण्डन–मण्डन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले पार्टीको संस्थागत निर्णय मान्ने हो । हिजो पार्टीले दुईओटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित उम्मेदवारले बढी मतान्तरमा जितेको निर्वाचित क्षेत्र छाडेर कम मतान्तरमा जितेको क्षेत्र नछाड्ने नीति लियो । पार्टी प्रमुख भइसकेको व्यक्ति तराईबाट निर्वाचित भएकोले राष्ट्रिय सन्देशका हिसाबले तत्काल रौतहट छाड्न नहुने स्थायी समितिले निर्णय ग¥यो । त्यसैले करिब १० हजार मतान्तरमा विजयी बनेको काठमाडौं–२ कानुनी र प्राविधिक हिसाबले छाडेको हो । तर, क्षेत्र नम्बर २ का जनताको विश्वास जितेको जनप्रनिधिको हैसियतमा यहाँका समस्या समाधान गर्ने, विकास निर्माणका काममा अगुवाई गर्ने मात्र होइन, भावानात्मक रुपमा पनि म कहिल्यै पनि अलग भइन । क्षेत्रको विकास निर्माणको अगुवाई गर्ने सन्दर्भमा, प्रत्येक वडा–टोलवासी जनतासँगको प्रत्यक्ष भेटघाट, समस्या समाधानका लागि पहल लिने कुरामा म निरन्तर रुपमा लाग्दै आएको छु । रौतहटको विकास निर्माणको काममा पनि उतिकै क्रियाशील छु । मेरो चिन्ता र सपना–आर्थिक रुपले सम्पन्न समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने हो, साथै काठमाडौं–२ लाई नमूना क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने हो । यस काममा म हिजो पनि क्रियाशील थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहनेछु ।
० तपाईलाई चुनाव जिताएर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ का जनताले के पाउँछन् ? विकासका योजनाहरु केके छन् ?
– हामीले संविधान निर्माणपश्चात राजनीतिक रुपमा युगान्तकारी परिवर्तन गरेका छौं, क्रान्तिको एउटा चरण पुरा गरेका छौं । समाजवादसम्मको लक्ष्य किटान गर्दै संविधानमा जनताका राजनीतिक अधिकारहरु सुनिश्चित गरेका छौं । अब आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणसहितको समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने अर्को चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं । यो कामको अगुवाई चुनावपछि बन्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन सरकारले गर्नेछ । काठमाडौं–२ ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक र पयर्टकीय दृष्टिले सम्पन्न क्षेत्र हो । त्यसैले यी समग्र कुराको विकासका लागि गुरुयोजनाका साथ काम गर्ने मेरो योजना छ । म प्रधानमन्त्री भएको बेला सडक बिस्तार, पूर्वाधार विकास, प्राविधिक शिक्षालय, पोलिटेक्निक कलेजको स्थापनालगायतका धेरै काम भएका छन् । ती सबै कामलाई अझ पूर्णता दिनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेछु । भूकम्पपछि क्षत–विक्षत बनेको साँखु क्षेत्रको ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र विकासका लागि पुननिर्माणलाई तीब्रता दिनेतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । शंखरापुर–साँखु राजधानी काठमाडौंलाई चीनको तिब्बतसँग जोड्ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरानो व्यापारिक नाका पनि हो । त्यहाँको सडकलाई चीनसम्म बिस्तार गर्ने, साँखुमा भृकुटीको ठूलो मूर्ति स्थापना गरेर आन्तरिक र बाह्य पयर्टकको आकर्षण केन्द्र बनाउने, साली नदीको संरक्षण गर्दै ऐतिहासिक धार्मिक र पयर्टकीय नगरका रुपमा विकास गर्ने, नाङ्लेभारे–जहरसिंहपौवा–लप्सीफेदी क्षेत्रलाई ‘कृषि उत्पादन जोन’का रुपमा संरक्षित गर्दै विकास गर्ने, यो क्षेत्रलाई पयर्टकीय गन्तव्यस्थलमा परिणत गर्ने, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरपालिकालाई आधुनिक ‘स्याटलाईट स्मार्ट सिटी’का रुपमा विकास गर्ने, मूलपानीको अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको काम छिटो सम्पन्न गर्ने, एअरपोर्टको जग्गा अधिग्रहणमा परेका पुरानो सिनामंगल र जडिबुटी क्षेत्रका जनतालाई छिटोभन्दा छिटो उचित मुआब्जासहित पुनस्र्थापित गर्ने मेरो योजना रहेको छ । त्यस्तै, तिनकुनेको जग्गाको उचित मुआब्जा दिलाउने, कोटेश्वर क्षेत्रको खानेपानीलगायतको समस्या समाधान गर्ने, मनोहरा कोरिडोर निर्माण सम्पन्न गरी हरित क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने, प्रत्येक वडा र टोलका सार्बजनिक जग्गाहरुमा वृद्ध–वृद्धाहरुका लागि चिकित्सा सेवासहितको आश्रम, बाल उद्यान निर्माण गर्ने, यस क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा आधुनिक चिकित्सा सेवासहितको अस्पताल निर्माण गर्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाईपलाईन बिस्तार गर्दै २ नम्बर क्षेत्रका जनतालाई मेलम्चीको खानेपानी उपलब्ध गराउन पहल गर्नेलगायतका विषयलाई मैले योजनाका रुपमा अघि सारेको छु ।
० तपाईले धेरै पटक चुनाव लडिसक्नुभयो । युवा वर्गलाई नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
–पहिलो कुरा त, २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा युवाहरुको नेतृत्व विकास अबरुद्ध भएको थियो । लामै समयपछि भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा धेरै युवाहरु जननिर्वाचित प्रतिनिधिका रुपमा आउन सफल हुनुभएको छ । जहाँसम्म, केन्द्र र प्रदेश तहको संसद र पार्टीको नेतृत्व तहमा युवाहरुलाई स्थापित गर्ने कुरा छ, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले ‘सिस्टम’ स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने नेतृत्व कसैले कसैलाई हस्तान्तरण गर्दैमा एकैचोटी विकास भइहाल्ने होइन । हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै आएका छौं । पुजिपति वर्गको पार्टीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै जनताको मन जितेर अघि बढ्ने, पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि श्रेष्ठता हासिल गर्न सकिने ‘सिस्टम’लाई अवलम्बन गरिरहेका छौं । यसलाई अझ दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जाँदा क्रमश ः युवाहरु अझ बढी नेतृत्वमा स्थापित हुँदै जानेछन् भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । तर, यसका लागि युवाहरु स्वयम् नै अझ बढी सकृय हुन जरुरी छ । यो निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा हाम्रा आधाभन्दा बढी साथीहरु नयाँ अनुहारका रुपमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । पार्टीको पदाधिकारी तहमा पनि युवा–विद्यार्थी आन्दोलबाट स्थापित युवा साथीहरु पुग्नु भएको छ ।
० प्रतिस्प्रर्धी भन्दा तपाई के कारणले अब्बल ? तपाईले जित्नै पर्ने कारणहरु के–के छन ?
– सवाल अब्बल र कमसल भन्ने होइन । सवाल यस क्षेत्रको विकासका निम्ति र समग्र मुलुककै विकासका निम्ति को आश्यक भन्ने हो । मेरो जीवन खुल्ला किताब जस्तै छ । म निष्ठा, इमान्दारिता, पारदर्शिता, सकृयता र स्वाभिमानमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ । जनबिरोधी क्रियाकलापसँग आजसम्म सम्झौता गरेको छैन । राजनीतिक यात्रामा अनेकन घुम्ती पार गर्दै पार्टी र मुलुकको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेको छु । को आवश्यक छ भन्ने पैmसला यस क्षेत्रका जनताले नै दिनुहुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । म निष्कृय होइन, निरन्तर सकृय जीवन बिताउने गतिशील मान्छे हुँ । समयको प्रवाहसँगै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु । जनताको हरेक दुःख–सुःखसँग गाँसिन चाहान्छु । अहिले वाम गठबन्धनको चुनाव परिचालन कमिटीले निर्वाचनको प्रचार अभियान अघि बढाइरहेको छ । यसक्रममा चुनावी घरदैलो पनि उत्साहजनक ढंगले अघि बढिरहेको छ । बृद्ध बा–आमा, दिदीबहिनी–दाजुभभाइहरुले भावी दिनमा मुलुकलाई सफल ढंगले नेतृत्व गर्ने आशिर वचन दिइरहनुभएको छ । उहाँहरुको त्यस्तो प्रेम र सद्भावलाई मैले हृदयदेखि नै स्वीकारेर चुनावी अभियान अघि बढाइरहेको छु ।
० तपाईहरुले घोषणापत्रमा धेरै कुराहरु उल्लेख गर्नुभएको छ । धेरै सपना बाड्नु पनि भएको छ । के ती सबै घोषणा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ ?
– सपना बाँड्ने मात्र होइन, विपनामा परिणत गर्ने हो । हामीले गरेका सवै घोषणा कार्यान्वयन गर्नका लागि हन् र वाडेका सपना सवै विपनामा साकार पार्नका लागि हुन् । हामीले गरेर देखाउने छौं । सम्भ छ, अवश्य सकिन्छ ।
० के बजारमा चर्चा भए जस्तै तपाईंहरुले साम्यवादी व्यवस्थाका लागि वामपन्थी गठबन्धन गर्नुभएको हो ?
– अधिनायकवाद वा साम्यवादी गठबन्धनको यो आरोप केवल पराजित र हतास मानसिकताको अभिव्यक्ति मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्दछ । के हामीले पनि कांग्रेसको जस्तै लोकतन्त्रको नारा जपेर नागरिक सँधै गरिब, तर मुठीभरका व्यक्ति मात्रै धनी र सुखी हुने लोकतन्त्रको ब्याख्या गर्नुपर्ने ? हामी सबै नेपाली धनी र सम्पन्न हुने सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र स्थापित गर्न चाहान्छौं । म प्रष्टसँग भन्न चाहान्छु हामी आर्थिक उदारिकरणका डम्फू बजाएर देशका उद्योग–धन्दा र कलकारखानाहरु कौडीका रुपमा बेच्ने, देशको स्वाभिमान समाप्त पार्ने, लाखौं युवाहरुलाई खाडी मुलुकको चर्को घाममा श्रम गर्न पठाउने, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, हलियाहरुलाई सँधै बाँधा मजदुर बनाउने लोकतन्त्रको विपक्षमा छौं । जमिनको वर्गीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादकत्व बढाउँदै समुचित वितरण प्रणाली स्थापित गर्ने, देशलाई समुन्नत बनाउने लोकतन्त्रको पक्षमा छौं । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, लोकतन्त्रका अन्तराष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई व्यबहारिक रुपमै स्थापित गर्न चाहान्छौं । शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्दै देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने, शिक्षालाई श्रम, शीप र रोजगारसँग जोड्ने अभियानमा छौं, योजनामा छौं । त्यसैले कांग्रेसका नेताहरु वाम गठबन्धनबाट भयवित हुनुभएको छ । म उहाँहरुलाई पराजित मानसिकताले विक्षिप्त बनेर होइन, आफ्ना नीति कार्यक्रम र योजनाका आधारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आह्वान गर्दछु । म चुनौतिका साथ भन्न चाहान्छु– आउनुस्, छलफल गरौं नीति र व्यबहारमा को लोकतन्त्रवादी ? गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता त्यागी र स्थापित नेतालाई पार्टीमा सम्मानजनक ब्यबहार गर्न नसक्ने, लोकतन्त्रलाई दरबारमा बुझाउने कांग्रेससँग हामीले अब लोकतन्त्रको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने ? उहाँहरु कुन मुलुकको ? कुन विद्वानको लोकतन्त्र अनुशरण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? हतास बनेर होइन, धैर्य र शान्त मुद्रामा खुल्ला बहसमा आउन म चुनौति दिन चाहान्छु ।
० पार्टी एकता सम्भव छ ? कि चुनाव जित्नका लागि मात्र पार्टी एकताको नौटंकी भएको हो ?
–पार्टी एकता सम्भव छ । शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट समाजवादसम्म पुग्ने भन्ने तय भइसकेको छ । चुनावलगत्तै विगत आन्दोलनको समीक्षा र वाँकी सैद्धान्तिक प्रश्नहरुको हल गर्नुका साथै सांगठनिक संरचनामा कुरा मिल्ने बितिक्कै एकीकरण सम्पन्न हुनेछ ।
० एमाले नै एक ढिक्का छैन, माओवादीमा पनि त्यस्तै छ । अब दुबै पार्टी मिसिएपछि राप्रपाको हालत पो हुने हो कि ?
– हामी दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु निक्कै लामो अनुभव, राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको ठोस विश्लेषणसहित एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण होस् भन्ने जनताको चाहना र हाम्रो योजना पूरा गर्न एक ढिक्का भएका हौं । सैद्धान्तिक रुपमा एक ठाउँमा उभिसकेपछि को–कहाँ रहने ? कसको के भूमिका रहने भन्ने कुरा गौण कुरा हो । जीवन्त पार्टीमा यस्ता धेरै विषय र प्रश्नहरु व्यक्तिको सकृयता र पहलकदमीले पनि हल हुँदै जानेछ । त्यसैले एकीकरणपछि कुनै ठूलो समस्या देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विभाजन र एकीकरणको प्रकृयाबाट नै यहाँसम्म आइपुगेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी जीवनमा यस्ता अनिगिन्ती अनुभवहरु हासिल गरिसकेका छन् । धेरै पार्टीबाट होइन, कमभन्दा कम पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ । त्यसैले खासै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० अन्त्यमा गलत राजनीतिक गतिबिधिबाट आजित भएका आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– हामीले मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौं । अव मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको महा अभियान संचलन गर्नु छ । त्यस महा अभियानलाई सफलीभूत पार्नका निम्ति कायम भएको वाम गठबन्धनलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर अत्यधिक बहुमतका साथ विजय गराउनुहुन सवैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।